Christian music bụ nanị mkpụrụ obi nri nke gosiworo na-arụ ọrụ mgbe niile ọzọ na-emezughị. Ukwuu nke Christian genre mara mma na-ada ka na-ewu ewu now songs ị na-anụ na redio, ma ihe dị iche na-ada banyere site ozi dị ka ọ zaa mkpụrụ obi. Christian music emepụta a idaha olileanya na a yiri ka olileanya adịghịkwa ọnọdụ na ọ bụ n'ihi nzube a na ọtụtụ N'ihi na nke a genre n'oge ihe siri ike. E nwere 1000 nke Christian artists ma isiokwu a nwere ndepụta nke ndị mere ihe ịrịba ama arụmọrụ a na genre.
Part1. Ebere Me.
Part2. Hillsong United Band.
Part7. Nkedo okpueze
1. Ebere Me.
Ebere m bụ ihe American dịkọrọ ndụ music gbalaga tọrọ ntọala na Greenville, Texas. The gbalaga e hiwere na 1994 na mejupụtara isii bụ ndị òtù. The ìgwè nweela maara aha na imata mgbe ntọhapụ nke mbụ ha cross n'elu otu "Enwere m naanị ike were" nke mere ka mpụta mbụ nke mbụ ha album "fọrọ nke nta n'ebe ahụ". Ebe ọ bụ na mgbe ahụ ìgwè ahụ wepụtara isii ọzọ studio albums na nwere 13 consecutive top ise kpọrọ na billboard Christian songs eserese na nke 7 nke ha na-eru ọ dịghị. 1. The gbalaga meriwo 8 Nduru Awards, 1 ASCAP award na 2 American music enọ. Ha na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
enwere m ike ịche ya naanị n'echiche
Onyenwe m ebuli aha gị dị elu.
Ịhụnanya nke Chineke.
2. Hillsong United Band.
Hillsong n'otu gbalaga bụ a ofufe gbalaga nke sitere dị ka akụkụ nke Hillsong chọọchị na Sydney, Australia. Kpụrụ na 1998, ọ bụ nke ọtụtụ n'usoro n'usoro ndú si chọọchị na onye ndú ha Darlene Zschech. The gbalaga tọhapụrụ ha mbụ album atuak heaven na-agbanwe agbanwe na ụwa nyere ha okwukwe na ude na ebe ọ bụ na mgbe ahụ, ha nwere tọhapụrụ 11 kwa afọ ndụ albums na anọ studio albums. Na 2013, ha otu song oké osimiri ebe ụkwụ nwere ike ghara ruru NO.1 na American billboard Christian songs chaatị. Ha na-ọma mara ndị na-esonụ Hits.
Nzọpụta bụ ebe a
Olileanya nke ụwa.
Mụrụ 10th March, 1983, Carrie Underwood bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter na omee. Ọ ekewet ọtụtụ Christian egwu music na o bilie ka ama dị ka na-eto eto nke pụta oge nke American arụsị ke 2005. Ọ pụtawo ọtụtụ music ndekọ na nke a dugara ya ga-edeba aha ya n'usuu ke Oklahoma Music Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha na 2009.She nwere ndibọhọ ọtụtụ awards gụnyere 7 Grammy awards na iri na asaa billboard Music Awards. Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Mama si song
Dị nnọọ a nrọ.
Mụrụ May 18, 1985, Francescar Battistelli bụ a Christian egwú, songwriter na a ndekọ omenka si New York, City. Ọ tọhapụrụ mbụ ya otu "M na-ekwe ka na-aga" na 2008 na ka charted on National Christian chaatị dị iche iche CHR kemgbe ahụ na natara mbụ ya Grammy nomination Award na 2009 maka kasị mma gospel arụmọrụ. Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Ọ maara aha m
Angel site gị n'akụkụ
Lecrae Moore bụ ihe American Christian hip iwuli elu omenkà, songwriter na ndekọ na-emeputa mụrụ October 9, 1979. Ọ bụ ngalaba-nchoputa nke Independent Record Label na president nke Reachlife ministri. Atọ ya solo album Rebel wepụtara na 2008 ghọrọ ndị mbụ hip iwuli elu album iru ọ dịghị. 1 na billboard Christian Chart. Ọ ndibọhọ Grammy award maka kasị mma gospel album nke 2013 Grammy enọ. Ọ bụ ya bụ ma ama na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
All m mkpa bụ na ị
Ekwela ndụ gị.
Newsboys bụ onye Kraịst pop oké nkume mmachi tọrọ ntọala na 1985 na Queensland, Australia. The gbalaga mejupụtara 4 nka onye na-ọma mara ha egwú arụmọrụ. Ha wepụtara 16 albums 6 nke nke e gbaara gold. The gbalaga ndibọhọ 1995 Nduru maka onyinye nturu ugo nkume album nke Year. Ha na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
Chineke bụghị ndị nwụrụ anwụ
Ọ na-achị achị
7. Nkedo okpueze
Nkedo okpueze bụ a Kraịst oké nkume mmachi malitere na 1999 site ntorobịa pastọ Mark Ụlọ Nzukọ Dayton osimiri, Florida USA The gbalaga mejupụtara 7 òtù na meriwo Grammy na nduru enọ. Ha natara mbụ ha gold asambodo maka otu song "Ònye ka m" na 2005 ha lifesong debuted na no.9 na billboard 200 albums chaatị. Ha na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
Eme nke ọma
-Eto gị na oké ifufe.
Needtobreathe bụ ihe American dịkọrọ ndụ Kraịst oké nkume mmachi si Seneca, South Carolina na USA The gbalaga e guzobere na 1998 na nwere anọ òtù. Ha wepụtara ise albums na na 2008 e nominated maka abụọ nduru awards na 39 GMA Nduru Awards. Ha na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
Ihe mara mma
Ghewenụ anya unu oghe
Na-asa site na mmiri.
Mụrụ April 5, 1984 na San Diego, California, Phil Wickam bụ a dịkọrọ ndụ Christian vocalist, songwriter na guitarist. Wickam ka a tọhapụrụ asaa CDS na-ewu ewu n'ụwa nile na egwu ozi. Mbụ ya album "Nye m okwu gị" e wepụtara na 2003. Ọ na-ewu ewu na-esonụ Hits:
A bụ ihe ịtụnanya amara
Na aha gị
Mandisa Hundley bụ ihe American gospel na a dịkọrọ ndụ Christian artist mụrụ October 2, 1976 na California, USA Ọ na-ewere dị ka otu n'ime top American Christian artists na bụ ise American arụsị alumnus iji merie a Grammy Award. Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Joy apụghị ịkọwa
Ọ bụ na unu
Download music free na TunesGo >
Apple Music gụgharia Service
The Best Audio Tag Editor Software N'ihi Windows / OSX / Linux
Audio Ntụgharị: tọghata n'etiti ihe niile na-ewu ewu audio formats
The Best Way ka onwe Download / Record Pandora Music
> Resource> Music> Top 10 Christian Artists.